I-Chord enkulu kwindawo evulekile kwiGititar
I-Chord enkulu (i-Open position)
Iqhosha elikhulu kwindawo evulekile.
Ukuba umzobo ongentla awuqhelekanga kuwe, thatha isikhashana ufunde indlela yokufunda amashadi e-chord .
Iqhosha eliphambili ngokuqhelekileyo linye yeendlela zokuqala zokugitala zifundela ukudlala . Njengoko kunjalo nangayiphi na into ebalulekileyo, i-A key chord yenziwe ngamanqaku amathathu ahlukeneyo-A, C♯ kunye no-E. Nangona unako ukuluhluza ngaphezu kweethathu zintambo ngexesha elidlala umdlalo omkhulu, loo manqaku angeze nokuba ngu-A, Cchini okanye E.
Ukuqwalasela Lo Mkhulu
faka umnwe wakho wokuqala ngomnxeba wesibini womtya wesine
indawo yakho yesibini ngomnwe kwintsimbi yesibini yomtya wesithathu
faka umnwe wakho wokuqala ngomnxeba wesibini wechungechunge lwesibini
Xa udlala umdlalo omkhulu kwiindawo eziqhelekileyo "ezivulekileyo", ngokuqhelekileyo ufuna ukuphepha ukunqanda umtya wesithandathu ovulekileyo (nangona intambo yesithandathu ephantsi i-E, kunye nenxenye yesifundo se-A chord enkulu, kuzwakala kungavamile Inqaku eliphantsi lebhasi kule ndlela yokukhetha). Dlala umdlalo wokuqala ovulekileyo.
Eminye iFingering for This A Major Chord
Abanye abagqirha baziva bengakhululeki ngolu hlobo olukhankanywe ngasentla. Ukukhathazeka ngesimo esingentla ngentlobo eyahlukileyo:
indawo yakho yesibini ngomnwe kwintsimbi yesibini yomtya wesine
faka umnwe wakho wokuqala ngomnxeba wesibini wekhowudi yesithathu
Olunye uFingering Alternative Eli liCord Major
Njalo uza kubona iigitare zisebenzise enye iminwe ukuze udlale i-A chord enkulu. Ukuzama oku:
Ngamanye amaxesha, xa iqhosha eliphambili lifakwe ngale ndlela, umtya wokuqala ovulekile awudlali. Nangona isandi esiphumela sivala singagcwalanga, sisabonwa nje ngokuba siyinxalenye enkulu, njengoko inqaku elishiyiweyo "E" livele libonakala kwintambo yesine, yesibini intlungu.
Beka umnwe wakho wokuqala kwi-intsimbi yesibini yomtya wesine, kwaye uhlambe umnwe ngakho-ke ubeka intlungu yesibini kwiimbambo zesithathu neyesibini.
I-Chord enkulu (Ngokusekelwe kwi-G Major Shape)
I-chord enkulu esekelwe kwi-G ebalulekileyo.
Ukuba umzobo ongentla awuqhelekanga kuwe, thatha isikhashana ufunde indlela yokufunda amashadi e-chord.
Nayi indlela eyahlukileyo yokudlala i-Chord enkulu esekelwe kwisimo esivulekileyo se-G. Ukuze uqonde kakuhle oku, zama ukudlala umgangatho ophezulu weG . Ngoku, slayula yonke iminwe yakho kwi-frets ezimbini, ngoko umnwe wakho wesibini ungowesihlanu. Ngenxa yokuba uhambise amanye amanqaku kwisiqhelo, uya kufuneka kwakhona uhambise iintambo ezivulekile kwii-frets ezimbini. Ngoko, kuya kufuneka ulungelelanise iminwe yakho ukuze umnwe wakho wokuqala uthathe indima ye nutriyiti .
indawo yakho yesine ngomnxeba wesihlanu ngentambo yesithandathu
indawo yakho yesithathu ngomnwe kwisine yesine yomtya wesihlanu
faka umnwe wakho wokuqala ngomzi wesibini wesithintelo sesine, sesithathu nesesibini
Ukuba unenkathazo yokufumana iminwe yakho yokuqala ukuba ubambe zonke iintambo, zama ukunyusa ngomnwe wakho umnxeba, ngoko ke i-knuckle yakho ibonisa ngokuthe ngqo kwi-nut. Icala lomnwe wakho kufuneka lenze umsebenzi ongcono wokutshathisa imicu emininzi kanye.
Ndiyathemba, unokubona umG owona mkhulu kule ngqungquthela eyahlukileyo. Lo mlo omtsha yenza kube nzima ukubeka intsimbi yesihlanu kwintambo yokuqala eya kugqibezela ukuma kwe-G enkulu. Le ngxelo ishiywe apha, nangona kufuneka ukhululeke ukuzama ukuzongeza ngokwakho ngokulungiswa kwimilo yakho.
Lo mzobo weqhosha unomngcambu we-chord kwi-string yesithandathu. Ukuze ufunde indlela yokusebenzisa le fom efanayo ukudlala ezinye iinqununu ezinkulu, uya kufuna ukukhumbula ngeenqaku kumtya wesithandathu.
I-Chord enkulu (esekelwe kwi-E Major Shape)
I-chord enkulu esekelwe kwi-E ebalulekileyo.
Lo mfanekiso obalulekileyo osekelwe kumgangatho oqhelekileyo we- E e- chord shape. Abagitare abajwayelene nezikhetho ze-barre baya kukwazi oku njengowomgangatho oyimfuneko yokumisa umtya kunye nengcambu kwintambo yesithandathu. Ukuba awukwazi ukukhawuleza ukuba uqaphele u-E ubume obukhulu kwi-chord enkulu eboniswe apha, zama ukulinganisa i-E engundoqo. Ngoku, slayula yonke iminwe yakho ukwenzela ukuba iminwe yakho yesibini neyesithathu iphumle ngomhla wesixhenxe. Ngoku, ngenxa yokuba amanye amanqaku kwi-chord ahambile, kuya kufuneka "uhambise" imicu evulekile, ngokusebenzisa umunwe wakho wokuqala ukuba uthathe inxalenye yongoma.
indawo yakho yesithathu ngomnxeba wesixhenxe kwintambo yesihlanu
indawo yakho yesine ngomnxeba wesixhenxe wesithintelo sesine
indawo yakho yesibini ngomnwe kwisithandathu sesithintelo somtya wesithathu
cwenga umlenze wakho wokuqala kwi-fifth fret of all strings
Ukuba awuzange udlale lo mfanekiso wendawo yeqhosha ngaphambili, kuya kuba yithuba ngaphambi kokuba ufumane olu luhlobo olunzima lokubamba kakuhle. Gcina kuyo - le ngenye yeendlela ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo kakhulu, ngoko kuya kufuneka ufunde.
I-Chord enkulu (esekelwe kwi-D Major Shape)
I-chord enkulu esekelwe kwi-D ebalulekileyo.
Oku kuyinto engezantsi engundoqo yesiqalo sokubaluleka esekelwe kwinqanaba elivakalayo elivulekileyo leD evulekile. Ukuba awukwazi ukuqonda ngokukhawuleza isiseko esingundoqo se-D ngaphakathi kwinqanaba elibalulekileyo eliboniswe apha, zama ukulinganisa i- D engundoqo . Ngoku, yenza isilayidi yonke impazamo ukuze umnwe wakho wesithathu uphumle kwisantya seshumi. Ngoku, kuya kufuneka uphendule malunga nento esetyenziselwa ukuba ibe ngumtya wesine ovulekileyo ngokutshintshiselwa ukukhangela kwakho.
faka umnwe wakho wokuqala ngomsi wesibhozo wesine umtya
indawo yakho yesibini ngomnwe kwisithandathu sesithandathu somtya wesithathu
indawo yakho yesine ngomnxeba weshumi wesicatshulwa sesibini
indawo yakho yesithathu ngomnwe kwisithandathu sesithandathu somtya wokuqala
Ngenxa yokuba eli lilungu eliphambili, kwaye umtya ovulekileyo wesihlanu ngu-A, unokwazi ukucoca yonke imicu emihlanu, ukuphepha kuphela umtya o-E ophantsi. Ngenxa yerejista yayo ephakamileyo (equkethe amanqaku aphezulu phezulu kwintambo yokuqala), uya kufuna ukukhetha imeko zakho xa usebenzisa lo mfanekiso wesikhombi. Kuza kufuthela ukungaqhelekanga, umzekelo, ukuhamba ukusuka kumgangatho oqhelekileyo we-E uqobo oluya kubume obuboniswe apha. Endaweni yoko, zama ukudlala lo mfanekiso wesikhotho phakathi kwezinye iimoko kwirejista efanayo.
Lo mzobo weqhosha unomngcambu we-chord kwi-string yesine. Ukuze ufunde indlela yokusebenzisa le fom efanayo ukudlala ezinye izinto ezinkulu, uya kufuna ukukhumbula ngeenqaku kumtya wesine.
I-Chord enkulu (Ngokusekelwe kwiC C Shape)
Ingqungquthela enkulu esekelwe kwi-C ebalulekileyo.
Le nto imnandi kakhulu, isandi esiphezulu esona sakhiwo esisekelwe kumgangatho ophezulu ovulekileyo ovulekile. Lo mfanekiso obalulekileyo wokusetyenzwa kusekelwe kwimilo emiselweyo yendabuko. Ukuze uzame le nto ngokwakho, zama ukulinganisa i- C key chord , kwaye uyilawule yonke indlela eya phezulu kwi-fretboard, ngoko iminwe yakho yesithathu iphumla ngokukhawuleza. Qhathanisa indlela obambe ngayo ngesimo sokubhaliweyo esiboniswe apha, kwaye unokwazi ukubona uphawu oluyinhloko lweC olugciniweyo ngaphakathi kwayo (kwaye ngokuqinisekileyo, imo okhoyo ngoku i-nice sounding A7 chord). Ngoku, ukwenzela ukuba wenze i-chord isicoco esicocekileyo, kufuneka usebenzise umnwe ukuze ubambe iintambo ezivulekileyo.
indawo yakho yesine ngomnxeba we-12 wesithintelo sesihlanu
indawo yakho yesithathu ngomnwe kwi-11 yesithintelo yesine yomtya
Faka indawo yakho yesibini ngomnxeba wesithoba wesithintelo sesithathu, kwaye uyigqithise ngakho-ke inokuba yintsimbi yesithoba yesondo lokuqala
indawo yakho yesibini ngomnwe kwintsimbi yeshumi yomtya wesibini
Ndiyakhuthaza ukuba ukhululeke kakhulu ngolu hlobo lwamaqhosha - enye yindlela endithanda ngayo yokudlala amanani amakhulu. Ingasetyenziselwa ukusetyenziswa kwindawo ye-barre chord kunye neengcambu kwintambo yesihlanu kwaye inomxholo ogcweleyo, ngaphezulu "isandi sokuvula".
Lo mzobo weqhosha unomngcambu we-chord kwi-string yesihlanu. Ukuze ufunde indlela yokusebenzisa le fom efanayo ukudlala ezinye iinqununu ezinkulu, uya kufuna ukukhumbula ngeenqaku kumgca wesihlanu.
Yintoni Efana Nokuba Yizinto Zezilwanyana Zezilwanyana?
Yintoni i-Fallacy of Composition?
Ukufometha Umhla Ixesha Iimilinganiselo zokufikelela kwi-SQL eDelphi
IziCwangciso zePlanethi kwiNtshonalanga yamaMveli